Barcrest ရိန်းဘိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာ slot နှစ်ခု၏စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်, ထိုသက်တံ့ရောင်စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်: ရွှေ slot ပါ၏ရက်ကြောင့်မှားယွင်း. ဒီဂိမ်းကိုယခင်သူမြားကဲ့သို့အိုငျးရစျဆောင်ပုဒ်ရှိပြီး ပို. ပင်ဆုကြေးငွေ features တွေရှိပါတယ်. ဒီအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်သက်တံ့ရောင်စည်းစိမ်ဥစ္စာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသင်ထည့်သွင်းငွေပမာဏကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူဤကစားနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦး၏ slot ကဝါကြွား 100 စိတ်လှုပ်ရှားကစားသမားစောင့်ရှောက်ဖို့ချည်နှောင်ဖြစ်ကြောင်းဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူ paylines.
Barcrest အသိပ္ပံအားကစားပြိုင်ပွဲ Corporation ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ slot ကဂိမ်း developer များဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလက်ရှိအကြောင်းကိုလည်ပတ် 20,000 ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် slot ကစက်တွေ
အဆိုပါအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်ရိန်းဘိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂိမ်းရှိပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 100 paylines. ဒီဂိမ်းလှည့်ဖျားနှုန်းအဖြစ်တာက 100 အဖြစ်£မှလှည့်ဖျားနှုန်း 50p ကဲ့သို့နိမ့်ကနေပြ သ. ရ. အဆိုပါ RTP မှုနှုန်းကနေကွဲပြားခြားနားသည် 94% နှင့် 98%. သင်တစ်ဦးအနိမ့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်အချို့သောကြီးမြတ်ပျော်စရာရှာကြသည်လျှင်အဆိုပါဂိမ်းကစားရန်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒီဂိမ်းဟာအလွန်ကောင်းစွာသင်္ကေတများအားဖြင့်ဆက်စပ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်. သငျသညျ leprechauns များ, မြင်းသံခွါ, toadstools, Rainbow စသည်တို့ကို. ထိုအထိုကဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးကိုအဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်း card ကိုဂိမ်းသင်္ကေတများရှိပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းရှိလာသောစိန်ပွင့်စသည်တို့ကို. ဆောင်ပုဒ်သင်္ကေတကဒ်သင်္ကေတများထက်ပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုး.
အဆိုပါ slot ကအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အတူကြွယ်ဝ. သငျသညျဆုကြေးငွေသုံးခုအမျိုးမျိုးရှိသည်ရိုင်းသောသင်္ကေတမှခွဲ features. ပဌမ, ထိုပူဖောင်းလွှင့်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးသောပတ်လည်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများရှိ. ဒီနေရာတွင်လေးက hidden ရွေးချယ်မှုထဲကတစ်ကောက်ဖို့ option ကိုရ. သငျသညျအရအခမဲ့လှည့်ခြင်းများအရေအတွက်သင်ရွေးချယ်ထို option ကိုအပေါ်မူတည်. ဒီနေရာတွင်အထိရနိုင် 100 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. လည်း, ဒီအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်ရိန်းဘိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂိမ်းဖြစ်ခြင်းသင်တို့သည်ဤအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကနေကြီးမားတဲ့အနိုင်ရတက်အဆုံးသတ်နိုင်.
နောက်တစ်ခု, ကျပန်းဖြစ်ပေါ်သော Fairy ဆုကြေးငွေရှိပါတယ်. ခုနစျပါးကွဲပြားခြားနားသောဆုကြေးငွေတစ်ကြိမ်ချီးမြှင့်သောတဦးတည်း၏ထွက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါဆုကြေးငွေအပို Wild ပါဝင်စေခြင်းငှါ, တိုးပွားစေ, အခမဲ့လှည့်ခြင်းများစသည်တို့ကို.
နောက်ဆုံးတော့, တိုင်း Barcrest ဂိမ်းထဲမှာ default အနေနဲ့ဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည်သော Big အလောင်းအစား option ကိုလည်းမရှိ. သငျသညျချီးမြှင့်ကြသည်5ထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးရိုင်းသောအဖြစ်အပို feature များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေလှည့်ခြင်းများ, ပိုပြီးပုံစံသင်္ကေတများစသည်တို့ကို.
သက်တံ့စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်: ရွှေ၏ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Barcrest ကနေအကောင်းဆုံးသေးသက်တစီးရီးထဲမှာတည်သည်. ဒါဟာသင်ပိုမိုအဘို့အပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေမှု slot ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ပမာဏကိုအပေါင်းတို့၌ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်. သင်ကကြိုးစားရမယ်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်ရိန်းဘိုးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီတော့အွန်လိုင်းရကလှည့်ဖျားပေး.
အိတ်ကပ် Fruity | slots အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုကုဒ်များ |…
ငွေသား slot အခမဲ့အပိုဆု | အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစား Start ကို